Maamulka Beled-xaawo oo dalbaday in la helo wada shaqayn dhexmarta booliska iyo bulshada – Radio Daljir
Oktoobar 13, 2013 3:06 b 0
Beled-xaawo, October 13, 2013 – Maamulka degmada Beled-xaawo ee gobolka Gedo ayaa bulshada ka dalbanaya in ay kala shaqeeyaan booliska howlaha nabadsugida degmada, iyo qorshaha soo celinta bilicda magaalada xuduuda ku taala.
Madaxa nabadgelyada degmada Beled-xaawo waxaa uu sheegay in uu hooseeyo is dhexgalka booliska iyo dadka magaalada, taas oo sahli karta kala war hayn la?aan iyo khataro amni oo si fudud loo fulin karo.
Maxamuud Faroole oo ah madaxa nabadgelyada maamulka degmada oo dadka kula hadlay goob fagaare ah, waxaa uu sheegay in shacabka beled-xaawo looga baahan yahay wada shaqayn dhexmarta bulshada iyo booliska.
Faroole waxaa uu ka hadlbaday dadweynaha magaalada Beled-xaawo in ay ?ka shaqeeyaan nadaafada degmada, gaar ahaan goobaha ganacsiga iyo meelaha ay dadku isugu yimaadaan, taas oo sahli karta in ay hagaagto bilicda magaalada.
Ugu dambayntii waxaa uu jeediyey hadal culus oo uu ku sheegay in talaabo laga qaadi doono cid kasta oo fulin wayda baaqa maamulka degmada, kaas oo ?la xiriira dhinacyada amaanka iyo soo celinta bilicda Beled-xaawo.
Baahin: Sabti, 12 Oct 2013, Caawa Iyo Daljir Weriye Cabdirisaaq C Cabdi Silver ~ Daljir ~ Galkacyo